I-Ash Suite - Ashford Acres Inn
I-Ash Suite iyisuite yezivakashi ezisondelene kakhulu ne-queen-bed esitezi sesibili sendlu, enegumbi lokugezela le-en-suite kanye nezitebhisi ezizimele. Nethezeka embhedeni othokomele wesikhulumi nge-headboard ependwe ngesandla esikhumbuza amasango ensimbi aseningizimu.
Leli gumbi elithokomele, eliluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe, libheke indawo yethu enkulu, enhle nezihlahla zomlotha eziningi eliqanjwe ngalo, futhi liyincazelo yokwaneliseka nokwaneliseka. Amalineni athambile kanokusho, izingubo ezithokomele kanye nama-slippers, isikrini esiyisicaba sikamabonakude ohlakaniphile, i-inthanethi engenantambo, izilawuli zokushisa, nezinto zangasese ezinuka kamnandi, nezihambisana nemvelo zizungeze ukuhlala kwakho ongasoze wakukhohlwa kuleli gumbi lokwamukela.
Jabulela inkomishi yekhofi ngenkathi ubuka le ndawo efasiteleni lakho, noma ubukele imuvi ngenkathi uziphumulele embhedeni othambile. Noma ngabe yini oyifunayo lapho uhlala nathi, i-Ash Suite izokusiza ukuthi uyithole.